Shirkadda Golis oo ka qayb qaadatay xafladda qalin jabinta jaamacadda Bada Cas | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo ka qayb qaadatay xafladda qalin jabinta jaamacadda Bada Cas
Shirkadda isgaarsiinta Golis oo la qaybsatay farxadda qalin-jabinta ardayda jaamacadda Bada Cas ee soo afmeertay darajada 1aad ee waxbarashada sare.
Maamulka Jaamacadda Badda Cas ayaa shahaado sharaf ku maamuusay shirkadda Golis oo ay uga mahad-celiyeen doorka udub dhexaad-nimo ee ay ka qaateen qabsoomidda xafladda qalin jabinta dufacadda 7aad ee jaamacadda Bada Cas iyo sidoo kale taageerada had iyo jeer shirkaddu u muujiso bahda waxbrashada.
Cabdi-Naasir Siciid Maxamed (Amuuraale) oo ka tirsan waaxda suuqgaynta iyo xiriirka dadweynaha oo ku hadlay afka shirkadda Golis ayaa u hambalyeeyay ardaydii qalin jabinaysay isagoo xusay in maanta ay tahay maalintoodi, waxa uuna ku raja galiyay in shirkadda Golis iyo guud ahaan xarumaha wax shaqaalaysiiya iyo sanadahaan dambe shaqaalaha ka qaataan ardayda ka baxda jaamacadaha dalka sidaas darteedna ay ku faanaan waxbarashada ay ka qaateen jaamacadda Bada Cas.
Sidoo kale waxa uu xusay in maalgalinta ay ku biirisay shirkadda Golis qabsoomida xafladda dufcada 7aad ee jaamacadda Bada Cas oo kaliya aysan ahayn hawlaha iyo taageerada ay shirkaddu la garab istaagto jaamacadda bada cas iyo guud ahaan bahda waxbarashada balse ay mar walba diyaar ula tahay inay kala qayb qaadato baahi walba oo ay qabaan bahda waxbarashadu.
Si kastaba ha ahaatee maamulka jaamacadda Bada Cas ayaa kula dardaarmay shirkadda Golis inay sii wado xil iska saaridda iyo la shaqaynta bahda waxbarashada si ay ugu daydaan shirkadaha kale ee dhigeeda ah oo aan ka muuqan goobaha cilmiga.